Mazano ekuti uwane zvakanakisa kubva Vhidhiyo Email Kushambadzira | ECommerce nhau
Mukati Email Marketing isu tinowana akasiyana marongero akatarisana nekunyengetedza kwevatengi vedu. Vhidhiyo Email Kushambadzira inotora chikamu chakakosha. Uye ndezvekuti kunyangwe paine makore Email Kushambadzira kunoenderera kuve imwe yeanoshanda matekinoroji kuzivisa, kudzidzisa, kutaurirana uye kunyengetedza vatengi. Iwo mabhenefiti ayo makuru anosanganisira kuchengetedza nguva, otomatiki, chikamu chevateereri uye nemitengo yakaderera.
Ndokusaka tiri kuenda kutarisa kuti tingawane sei zvakawanda kubva Vhidhiyo Email Kushambadzira. Kwete chete mukupa matipi uye kuraira, asi mukusaita mhosho dzinogona kuwana zvakapesana neizvo zvakatemerwa. Uyo wekukanda mushandirapamwe wekushambadzira pasi. Shanduko yaro yasvika padanho rekuti tsika dzekare uye dzakanaka dzaive dzave, dzasvika pakuzadza.
1 Zvemukati zvekukosha kune vateereri vako
1.1 Masekonzi ekutanga akakosha
2 Ita kuti zvive nyore kuzvinyoresa kubva kunhepfenyuro dzako
3 Tumira chinyorwa chinonyengetedza chinoda chiito
3.1 Mushandisi kufona kuita
4 Gadzirisa iyo email
5 Gadzira nyaya ine akateedzana mavhidhiyo
6 Uye zvechokwadi, tarisa huwandu hwekutumira
Zvemukati zvekukosha kune vateereri vako
Ichi chidzidzo chakakosha mune chero mushambadziro wekushambadzira, asi uriwe iwe unofarira bato, unofanirwa kuona kuti chii chinopfuudzwa. Hazvina kukwana kutenda kuti zvirimo zvakanaka, asi Kuti mutengi anonzwisisa kubva pakutanga kuti icho chinhu chinomufadza.
Zvingangodaro, iwe uri kuzoisa chikamu vatengi vako. Saka, zvakanak kuvanzwira tsitsi. Zviise munzvimbo yevanogamuchira, uye tanga waunza izvo zvauchapa kana kugadzirisa. Usatange waenda kutsanangura zvaunopa, varege vazviwanire pavanenge vachiona vhidhiyo. Kana iwe ukatanga kutsanangura chigadzirwa chako, uri kuzomhanyisa mari yakaipa iyo vazhinji vavo vanokutiza iwe. Nekuti vanhu havafarire chigadzirwa chako, asi zvakanyanya pane izvo zvauchapa. Koshesa zvemukati nekwanisi yekunyengerera kubva pakutanga.
Masekonzi ekutanga akakosha
Zvinoenderana neiyi poindi, kana vhidhiyo yatanga kutamba, funga kuti masekondi ekutanga akakosha. Unogona kucherechedza ichi chinoshamisa muYouTube kushambadza. Mazhinji acho anogona kubviswa mukati memasekonzi mashanu ekutanga. Izvo hazvina kuitika kwauri kuti iwe uzvione, asi kune zvimwe zvinomutsa kuda kwako, uye unoramba uchizviona here? Ndo zvandiri kureva.
Ita kuti zvive nyore kuzvinyoresa kubva kunhepfenyuro dzako
Chikonzero chikuru ndechekuti kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vasiye zvinovaita vasina hanya uye vanozvikoshesa, kana kuti, isu tese tinozvikoshesa. Kubva pano, kana iwe uchihaya sevhisi yauri kunetseka kuzvinyoresa haina maitiro akanaka. Asi kana iwe ukasanganisira iyo sarudzo, iwe unoratidza kuti hapana matambudziko, uye zvakare woita kuti zvionekwe, ndiyo poindi inofarirwa kwete inopokana. Zviripachena, iwe haufanire kuzviita zvakare kupenya. Asi ini ndinofunga ndinonzwisiswa. Asi kune zvekare zvimwe zvikonzero zvitatu:
Kukundikana kuisanganisira kungaita kuti vateereri vako vasarudze email kuimaka se "spam." Kuti uite izvozvo unogona kukonzera kudonha mu «sender mamaki» yeemail yako, ndiko kuti, kudonha mukurumbira wako. Izvo zvinotisvitsa kune inotevera poindi.
Maemail mazhinji ku spam folda, anokonzeresa kudonha mu «sender mamaki», uye anowanzo kuve kududzirwa seemail email. Nenzira yekuti iwe ungadai wakonzeresa vateereri vako kuti vasambove neruzivo nezvezvawakatumira.
Zvakare, kuzvinyoresa kubva kusevhisi, iwe unogona kubatsirwa kubva kwauri. Pedzisa chikonzero chekubvisa neongororo diki. Aya manhamba anogona kuve akakosha kufunga nezve yega yega remangwana Vhidhiyo Email yaunotumira.
Tumira chinyorwa chinonyengetedza chinoda chiito
Nguva zhinji pane maemail ayo, kana akagamuchirwa, haatikurudzire zvakanyanya nekuti nyaya yaanotumirwa nayo haikwezve kutarisa kwedu. Rangarira kuti chinyorwa chinonyengetedza chinobatsira mutengi kuona kuti zvinonakidza kuvhura email, uye kwete kuidzima. Chinhu chine nyasha shomashoma, chinogona kukanganisa nenzira yakaipa kwazvo mabasa akanakisa, ekusaonekwa. Haasi munhu wese anozoivhura, ichokwadi, asi kune izvi chiyero chekudzvanya chiri kuzoshandwa uye kuongororwa. Nenzira imwechete iyo zvinoitika nekudana kwekuita.
Mushandisi kufona kuita
Chero zvazvingaitika, unofanirwa kutarisira iyo inosimbisa Kudanwa kune chiito. Kugadzira meseji kujekesa kuti mushandisi aite zvaunoda. Muchiitiko chekuti chiitiko chekufona chiri chifananidzo, siya chinongedzo mune chinyorwa chinyorwa kune rimwe divi reemail. Dzimwe nguva mifananidzo sezvaungave iwe waona inogona kuvharirwa, saka iko kudaidzira kune chiito kunogona kurasikirwa. Nenzira iyi, iwe unozoichengeta ichioneka.
Gadzirisa iyo email
Dzivisa kushandisa generic senders muemail yako, saka hazvingopedzisi pane iyo spam runyorwa. Apa ndoreva maemail erudzi "info@blabla.com", "publicity@blabla.com" kana "company@blabla.com".
Saizvozvowo, kupa zvinotumirwa kubata kwevanhu. Zita remunhu riri nani pane dhipatimendi, semuenzaniso. Chiyero chakavhurika chinowanzo kuve chiri nani, uye zvisungo zvepedyo zvinogona kugadzirwa zvehukama hweramangwana. Zvese mukutenga zvigadzirwa, semazano, kana kusahadzika nevatengi.
Mune zvimwe zviitiko apo vatengi vanoziviswa kuti vava kuda kutenga chigadzirwa, iyo email inogona kutumirwa iine zita rimwe chete rekutengesa iro raive rakabatana naro. Izvo zvine musoro uye zvinopfuura kuratidza kuti izvo zvinozivikanwa zvinokwezva zvakawanda.
Gadzira nyaya ine akateedzana mavhidhiyo
Kana iwe uchironga kuenderera neVhidhiyo Email Kushambadzira, funga kushandisa vanhu vamwe chete. Vako vangangoita vatengi vachatanga kujairana neavatambi, uye uchave nesarudzo yekugadzira nyaya pfupi. Nenzira iyi, ukangotumira vhidhiyo itsva yekushambadzira, unokwezva kutariswa. Vanhu vanofarira kuona kuenderera kwenyaya dzatinoziva.
Uye zvechokwadi, tarisa huwandu hwekutumira
Vanhu vazhinji vane tsika yekuzvinyora yenzvimbo idzo dzisingaregi kutumira kushambadza. Isu tese tine muganho, uye kunyangwe munzira yakakura uye inoramba ichienderera, inogona kupa mhedzisiro munguva pfupi, hazviwanzo kushanda kuchengetedza vatengi. Kuongorora nekuongorora kukanganiswa uko kushambadza uko kunotumirwa kunokonzeresa kune vatengi kuchatibatsira kunzwisisa kana pamwe tiri kupisa mabhokisi avo emabhokisi.
Ndine chokwadi chekuti nemazano aya, yako yekudzvanya-kuburikidza chiyero ichawedzera, uye iwe unowana kuwedzera kuvimbika kubva kune vako vatengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Mazano ekuti uwane zvakanakisa kubva Vhidhiyo Email Kushambadzira